imibukiso eziningi zanamuhla futhi ema-disco asetshenziselwa imiphumela ezahlukene imisebenzi yabo. Lapho yale miphumela, umcimbi kangcono futhi kukhanga ngokwengeziwe okwenzeka, futhi ngesikhathi esifanayo eliluqoqayo eziningi abantu. Ngo show lanamuhla ibhizinisi isetshenziswa izibani strobe, umculo ukukhanya, lasers, pyrotechnics nentuthu. Omunye emangalisa kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo imiphumela okushibhile okungenamsoco okudayiswa sekuphekiwe intuthu esindayo, okuyinto edingekayo ukuze udale intuthu generator ekhethekile.
idivayisi okunjalo isebenzisa uketshezi ekhethekile lapho evuthayo likhipha esiningi ayinangozi intuthu impilo, esakaza phezu yonke indawo noma disco yesehlakalo. Ngokuvamile, uketshezi enjalo okuthengiswa okukhethekile ezitolo, kodwa eziningi Abadali ezenziwe ukungatholi bachithe imali okudlekayo ezibizayo futhi khiqiza it ngokwabo. Ngo ezivamile intuthu generator kuthululwe nenye glycerin futhi amanzi distilled, lapho isici esiyinhloko kuba glycerol ngokunembile, futhi amanzi ukhonza njengelungu diluent kuphela.
Iningi abanikazi disco uncamela bashunqise zabo ugesi. Ngenxa yale njongo, insimbi ezivamile, ipuleti ezishisayo okuyinto nepepper umkhombe ngoba uketshezi plate kokuvalelwa kanye Umfutho usebenzisa futha amancane ngoba usinika uketshezi. Yebo, i-generator intuthu ngezandla zabo ukwenza konke okusemandleni kodwa inikezwe izindleko zonke izakhi ezidingekayo kanye nobunzima inqubo, kuyoba ezibizayo. Kuyaphawuleka ukuthi kunzima ngempela ahlele ukuphepha zedivayisi futhi afeze olunembile Ukushisa ukulawula.
Okwamanje, i-Internet ingase ukuthenga esindayo intuthu generator ngenani lentengo elikahle. Ngesikhathi esifanayo, uma uliqhathanisa nabazalwane intengo izingxenye nabasebenzi, okuyizinto adingekayo ukuze bakwazi ukuzenelisa ukukhiqizwa, uthola eshibhile ngisho. Kubalulekile ucabangela ukuthi idivayisi magazini negalelo kakhulu futhi elawulwa kahle Ukushisa izinga. Ingasetshenziselwa ngenhloso professional, ukusebenzisa ezifana intuthu generator kungaba izinhlobo eziningana okudlekayo.
Ngaphandle amadivaysi evamile egijima ku glycerol, ngokuvamile kungenzeka ngempela ukuhlangabezana intuthu-imishini ezisebenzisa "ezomile" ice namanzi plain. Lokhu kunikeza intuthu kunalokho aminyene futhi ezisindayo, kodwa kumadivayisi abanjalo bangabaphostoli engabizi kunalawo ezisebenzisa glycerol.
Lapho generator intuthu ikhethwa, kubalulekile ukuba banake umthamo yokuqothulwa. On kuncike isikhathi wokusebenza isitshalo ngaphandle refueling. Futhi kubalulekile ukuba ucacise kudivayisi kanye enamathela indawo intuthu amandla bafudumale isici. Ezinye ugesi intuthu anemisila izesekeli ozikhethela noma amadivayisi ezikhethekile. Abakwazi liveze imiphumela eyengeziwe kusukela intuthu ngesimo indandatho twist, Jets, futhi kungaba ngisho lona umbala ethize, usebenzisa siqu strobe ukukhanya kwayo noma lemifanekiso ukukhanya. Ikhwalithi generator professional intuthu esindayo kuzodala emkhathini kwesokudla disco noma umbukiso. Kuyoba ukuheha abavakashi abaningi futhi ziyoba yinto idivayisi esisemqoka odala isithombe isikhungo sika.
Tantalum capacitors - ikakhulukazi enkonzweni
Thenga entsha cleaner wezindlu Bosch
Heater Quartz "TeplEko": ukubuyekezwa. Heater ngoba indlu: intengo
Kanjani ukuthuthukisa ikhono elihle lokukhulumisana nabanye? Kusho ukuthini umuntu okahle? Ukuhlolwa for sociability
Indlela ukulungiselela ujamu kusuka plums? Recipe ujamu obukhulu
Finishing kuvulandi zamapulangwe: Isinyathelo by Isinyathelo Imiyalelo